OKRSO's family: 10 January 2010
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း passport မရှိသူများ လုပ်ဖို့အကြံပေး
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က အကူအညီ တောင်းထားတာပါ . ပြီးတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာများလဲ သိစေချင်တာလဲ ပါပါတယ် . ကျွန်တော်တို့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ တရားဝင်ကော တရားမ၀င်ကော အလုပ်လုပ်ကိုင် နေတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မများရှိပါတယ် . ကောလဟာလတွေကလဲ တစ်ပုံတစ်ပင်ရယ်ပါ . အားလုံးကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အကြံပေးချင်တာ ကတော့ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေပြောပြောပါ . passport လုပ်ဖို့ ကိစ္စကို လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြပါ . အခု ဒီ passport လုပ်ပေးဖို့ကိစ္စဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ နိမ့်ပါးတဲ့ အဆင့်တွေနဲ့ လုပ်နေရတဲ့သူအဖို့ အတော်လေးကို မြင့်မားတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုကို ပေးလိုက်သလိုပါပဲ . နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်တော ဘယ်တောင်မှာပဲ လုပ်နေရလုပ်နေရ ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အသက်အာမခံ ရှိနေတော့ ကိုသေဆုံးသွားတောင်မှ မိသားစုအတွက် အကျိုးရှိနေဦးမှာပါ . အခွင့်အရေး လက်တစ်ဆုပ်စာပဲ ရတဲ့ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် သူ့နိုင်ငံသားနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေး ရဖို့အတွက် စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ ဒီအခွင့်အရေးကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လုပ်ကြပါ . လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါ . လုပ်ဖို့အတွက် ဘယ်ကနေစလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိတဲ့သူများ ကျွန်တော့်ကို ဟန်းဖုန်းနဲ့ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် . ကျွန်တော် နိုင်သလောက် ကူညီပေးပါ့မယ် .
အဲ့ဒီ့ passport လုပ်ဖို့ ဘယ်သူတွေက ကောလဟာလ ဖြန့်သလဲ ပြီးတော့ ဘယ်သူတွေက မလုပ်စေချင်တာလဲ
ဒါကတော့ရှင်းပါတယ် . လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ လူမှောင်ခိုပွဲစားတွေပါ . လူမှောင်ခိုပွဲစားတွေက သူတို့လုပ်စားမယ့် ဂွင်တွေပျက်သွားမယ်၊ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီ passport လုပ်ပြီးသွားရင် တရားဝင် ကြိုက်တဲ့နေရာကို သွားလာခွင့်ရမယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တစ်ခြားနေရာမှာ ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းဆီကို ခဏတဖြုတ် သွားလည်လို့ရမယ်။ မြန်မာပြည်ကို တရားဝင်ပြန်လို့ရမယ်၊ အဲ့ဒီ့လိုဆိုရင် သူတို့တွေရဲ့ မှောင်ခို ဇါတ်လမ်း တခန်းရပ်သွားမှာမို့ ကောလဟာလ ဖြန့်တာတွေပါ၊ ပြီးတော့ သူဌေးတွေ ဘာလို့မလုပ်စေချင်လဲ၊ ဒါကရှင်းပါတယ်။ ကိုတွေ ဒီအလုပ်မှာ လုပ်မယ်ဆိုတာကို ကိုတစ်ယောက်တည်း လက်မှတ်ထိုးရတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူဌေးကော ကိုပါ လက်မှတ်ထိုးရတာပါ။ သူဌေးနဲ့ကိုနဲ့ လုပ်ငန်း နှစ်ဦး သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့က လက်မခံချင်ဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်သမားတစ်ဦး မတော်တဆ သေဆုံးသွားမှာကို မစိုးရိမ်ဘူး၊ ပြီးတော့ စိတ်မ၀င်စားချင်ဘူး။ အခု ဒီ passport လုပ်ပြီး လုပ်ငန်းနှစ်ဦး သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်လိုက်တာနဲ့ စိတ်မ၀င်စားလို့ မရတော့ဘူး။ ဒီအလုပ်သမားသေ သွားတာနဲ့ ဒီအလုပ်သမား အတွက် နစ်နာကြေးပေးရမယ်။ နစ်နာကြေးကို ပြီးပြီးရော ပေးလို့မရပါဘူး။ သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်း ပေးရမှာပါ။ နောက်ပြီး (၃)လကို တစ်ကြိမ် ဘတ်(500) ပေးရတယ်ဆိုတာ ကလဲ အာမခံအဖွဲ့အစည်း ကနေ ဒီအလုပ်သမား ဒီအလုပ်မှာ သက်ရှိထင်ရှား ရှိသေးရဲ့လား ဆိုတာကို သိချင်လို့ လုပ်လိုက်တဲ့ အစီအစဉ်ပါ . အဲ့ဒီ့ပိုက်ဆံ သွားပေးတဲ့အခါ မိမိမဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိကိုယ်စား သွားပေးလို့မရပါဘူး။ မိမိကိုယ်တိုင် မျက်နှာပြပြီးတော့မှ ပေးရတာပါ။ ဒါကလဲ အလုပ်သမားတွေ အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အစီအစဉ်ပါ။ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေထက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ အလုပ်သမားလူဦးရေဟာ အများဆုံးပါ။ ကျွန်တော့် မျက်မြင် မြန်မာတွေကို အနိုင်ကျင့်နေတာတွေ၊ နှိမ်နေတာတွေကို တွေ့နေရတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ တစ်ကယ်တမ်း မြန်မာတွေနဲ့ သူတို့နိုင်ငံသားတွေ အလုပ်တစ်ခုကို အတူတူခိုင်းကြည့် အလုပ်ဆိုတာ အားလုံးနော် အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်ကအစ အထက်တန်းကျကျ အလုပ်အထိ ၊ စမ်းကြည့်လိုက် ကျွန်တော်ပြိုင်လောင်းရဲတယ် ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးဖက်ကနေ ၊ ဒီကောင်တွေက တတ်လားဆိုတော့ မတတ်ဘူး ဒါပေမယ့် ဆရာလုပ်ချင်တယ်၊ တစ်ချို့ဆိုရင် အလုပ်ခွင်ထဲမှာ ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုတောင် တစ်ခြား မြန်မာတစ်ယောက်ကို ခိုင်းပြီးကိုကတော့ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေပြီး အလုပ်ရှင်လာမှ ဟိုဟာကိုင် ဒီဟာကိုင်နဲ့ လုပ်တဲ့ ရှမ်းတွေလဲ ရှိသေးတယ်။ အဲ့တော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ အခု passport လုပ်ဖို့ကိစ္စကို မဖြစ်မနေလုပ်လိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလဲ ညီငယ်များ မေးလ်ပို့ပြီး ဒီကိစ္စကို မေးကြပါတယ်။ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ ..
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်လူငယ်များ အဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေ ....
ညီနေမင်း blog မှကိုးကားထားပါသည်။
အမေရိကန်သွားခွင့်မရရင် မြန်မာပြည် ပြန်ပို့မှာစိုးရိမ်မိ
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး (ယူအန်အိပ်ခ်ျစီအာ) ကနေ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများက လူ (၄၀၀) လောက်ကို ယူအန်အိပ်ခ်ျစီအာက တတိယနိုင်ငံတွေကို ထွက်ခွာခွင့် ဆိုင်းငံ့ထားတာ အခုဆိုရင် (၃) နှစ် ရှိပါပြီ။ အရင် မဲဆောက်မှာနေတဲ့ ဆိုင်းငံ့ခံထားရသူတွေ အပါအ၀င် လူ (၂၀၀၀) လောက်ကို ယူအန်အိပ်ခ်ျစီအာနဲ့ အမ်အိုအိုင်တို့ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက နို့ဖိုးစခန်းမှာ စခန်းသွင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲက လူ (၁၅၀၀) လောက်ကို ယူအန်အိပ်ခ်ျစီအာကနေ တတိယနိုင်ငံတွေကို သွားခွင့်ပြုခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းက လူတွေကျတော့ (၃၀၀) ကျော်ကို ဆိုင်ငံ့ထားပီး (၆၀) ကျော်ကတော့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ပယ်ချခြင်း ခံကြရပါတယ်။
နိုင်ငံခြားထွက်သွားတဲ့လူ (၁၅၀၀) ထဲက အများစုဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်ဘဲ အကြံအဖန်နဲ့ ထွက်ကြတဲ့လူတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ယူအန်က ၀န်ထမ်းတွေလည်း သိပါတယ်၊ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းက လူတွေကိုတော့ ထွက်ခွာခွင့် မပြုဘဲ ဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။ ယူအန်အိပ်ခ်ျစီအာအနေနဲ့ ဒုက္ခသည်အစစ်အမှန်နဲ့ အတုအယောင်တွေကို သေချာစိစစ် စေချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ စခန်းတွင်းမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပါ ဒုက္ခရောက်နေကြတာကို နိုင်ငံတကာက သိစေချင်ပါတယ်။ စခန်းထဲမှာလည်း စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေးဆိုတာ မသေရုံသာသာ အခြေအနေလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အားလုံးဟာ မြန်မာပြည်ပြန်လို့မရတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကို ၆-၁-၁၀ ရက်နေ့က စခန်းမှာ UNHCR က တာဝန်ရှိသူတွေ လာပြီး ဆွေးနွေးပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ထဲက နိုင်ငံခြားသူ အမျိုးသမီးအရာရှိတဦးပြောတာက ကျနော်တို့အားလုံးအတွက် လာမယ့် မတ်လမှာ ရက်(စ်) အော် နိုး အဖြေတခုခု သိရမယ်၊ ဘာအဖြေပဲထွက်ထွက် အမေရိကန်ကလွဲပြီး အခြားနိုင်ငံသွားခွင့်မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ကျနော်တို့အားလုံးဟာ အမေရိကန်ကိုထွက်ဘို့ လျှောက်ထားကြတဲ့လူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်းငံ့ခံရသူတွေထဲမှာ တချို့ဆိုရင် သားသမီးမြေးတွေ အမေရိကန်မှာ ရှိတဲ့လူတွေ ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူတွေလည်း အခုထိ သွားခွင့်မရှိသေးပါဘူး။
တခြားနိုင်ငံကိုလည်း လျှောက်ခွင့်မရှိတဲ့အပြင် အမေရိကန်က မခေါ်မချင်း (၁၀) နှစ်လား၊ အနှစ် (၂၀) လား စောင့်ရမယ့်သဘော ဖြစ်နေပါတယ်။ ပိုပြီး စိုးရိမ်ဖို့ကောင်းတာက ကျနော်တို့ကို အမေရိကန် မပို့ဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံမှာခိုလှုံနေတဲ့ လောနိုင်ငံက (မုန်) လူမျိုး ဒုက္ခသည်တွေကို ထိုင်းနိုင်ငံက အတင်းအကြပ်ဖမ်းပြီး ပြန်ပို့သလိုလုပ်မှာကို အထူး စိုးရိမ်မိပါတယ်ခင်ဗျား။
လောကနိဗ္ဗာန် နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး
ဆောင်ပါးရှင်။ စိမ့်စမ်းသော (ကော့ကရိတ်)
“သူငယ်ချင်းရေ ဒီမှာ နေရတာကတော့ ဘာမှ ပူစရာမလိုဘူး၊ စားဖို့ လည်း မပူရဘူး၊ နေဖို့လည်း မပူရဘူး၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် ဘာမှ ပူပင်စရာမရှိတော့ လောကနိဗ္ဗာန်ဘဲပေါ့သူငယ်ချင်း။ တစ်လမှာ အလွန်ဆုံးကုန်ရင် ဒေါ်လာ ၃၀၀၊ နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ကြေးငွေက ဒေါ်လာ ၈၀၀ ဆိုတော့ ဘာမှ အလုပ်လုပ်စရာမလိုဘဲ စားစရိတ် နေစရိတ်အပြီးငြိမ်း နှုတ်လိုက်ရင် တစ်လ ဒေါ်လာ ၅၀၀ လောက် ကျန်သေးတယ်”။
အထက်ပါစကားကို လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်ကျော်ကာလတုန်းဆီက ပညာရေးဌာနတွင် အတူတကွ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသော နယူးဇီလန်နိုင်ငံရောက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ ပြောစကားဖြစ်သည်။ သူ့ ဘ၀အတွက် ဘာမှ ပူပင်စရာမရှိသော လောကနိဗ္ဗာန်ဘ၀ကို ကျနော့်ဆီဖုန်းဆက်တိုင်း ပြောပြတတ်သည်။ တကယ့်အားကျစရာအတိ။ တကယ်သွားရောက်နေချင်စရာအတိပါပင်။
သူ့ အတွက် လောကနိဗ္ဗာန်ဘ၀ကို ကျနော့်အား အကျယ်တ၀င့်ရှင်းပြတတ်သည်။ လောကီဘ၀ လူ့ ချမ်းသာအတွက် ပူပင်စရာမရှိသလို လောကုတ္တရာအတွက်လည်း တရားဓမ္မများအားထုတ်ချင်ပါကလည်း အေးဆေးငြိမ်သက်စွာဖြင့် တရားအားထုတ်နိုင်ကြောင်းလည်း ပြောပြသေးသည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ လူ့ ဘ၀ခရီးလမ်းတွင် လောကီလူနေမှုဘ၀ ဘာမှ ပူပင်စရာမရှိတော့ ဘ၀သံသရာအတွက် လောကုတ္တရာခရီးလမ်းကိုလည်း ဖြောင့်ဖြူးစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမည်ဟု ထင်ပါသည်။ တကယ့်အားကျစရာပါပင်။
သို့ သော် ကျနော့်သူငယ်ချင်း သတိမထားမိသော ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ကရင်လူမျိုးတည်တံ့နေနိုင်ပါမည်လော ဟူသော အချက်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါသည်၊ ယနေ့ မျက်မှောက်ကာလတွင် ကျနော်တို့ ကရင်လူမျိုးများသည် အခြေအနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းတစ်ပါးဒေသများတွင် သိန်းဂဏန်းဦးရေဖြင့် ရောက်ရှိနေကြပါသည်။ အသွင်အမျိုးမျိုး၊ ပုံသဏ္ဍာန်အသွယ်သွယ်ဖြင့် ရောက်ရှိနေကြပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက်ကိုယ်စီဖြင့် ရောက်ရှိနေကြပါသည်။ ဘ၀အမျိုးမျိုး အတွေးအခေါ်အဖြာဖြာဖြင့် ကျင်လည်နေကြပါသည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် အလုပ်သမားဘ၀ဖြင့် အသက်မွေးမြူကြသူများရှိသလို တတိယနိုင်ငံများတွင် ဒုက္ခသည်အမည်ခံပြီး သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ ထောက်ပံ့ကြေးငွေများဖြင့် ပူပင်စရာမရှိ နေနိုင်ကြပါသည်။
ရေရှည်ကာလတွင် ကရင်လူမျိုးများဘ၀အတွက် ကျနော် ရင်လေးမိသည်။ ရာစုနှစ်၊ ထောင်စုနှစ်များအထိ စဉ်းစားမိတိုင်း တွေးထင်မိတိုင်း ရင်လေးမိသည်။ ထိုမျှမက နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းတစ်ပါးဒေသများတွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းလာမည့် အနာဂတ် ကရင်လူငယ်များ၏ဘ၀ကို တွေးထင်မိတိုင်း ရင်လေးမိသည်။ အခြားတော့မဟုတ်ပါ၊ ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းဖြင့်ပင် ရာစုနှစ်သက်တမ်းတစ်ခုလောက်တွင် စဉ်းစားကြည့်ပါက တကယ်ရင်လေးမိသည်။ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ဘယ်လောက်ပင်ရှင်သန်ထက်မြက်နေပါစေ ထောင်စုနှစ်သက်တမ်းတစ်ခုလောက် ကုန်ဆုံးသွားပါက အဆိုပါနိုင်ငံရပ်ခြားဒေသများတွင် မွေးဖွားလာမည့် ကရင်လူမျိုးများသည် မိမိတို့ ကိုယ်ကို “ကရင်လူမျိုး”ပါဟု ရာနှုန်းပြည့် ကြွေးကြော်နိုင်ပါမည်လော။ သက်သေပြုနိုင်ပါမည်လော။ လောကီလူနေမှုဘ၀ဖြင့် ပူပင်စရာမလိုသော်လည်း ရေရှည်အနာဂတ်အတွက် ကျနော်ရင်လေးမိသည်။ အားနည်းသူကို အားကြီးသူက အနိုင်ယူလွှမ်းမိုးတတ်သောဓလေ့သည် ကမ္ဘာဦးက တည်ရှိသောဓလေ့ဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်အတွက် အထူးတလည် သက်သေပြုစရာလိုမည်မထင်ပါချေ။
တစ်ချို့သောကရင်လူမျိုးများကလည်း နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ခေတ္တယာယီမျှ သွားရောက်နေထိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းလာသောတစ်နေ့ဝယ် အမိမြေပေါ်တွင် ပြန်လာပြီး အခြေချ ကျေးဇူးဆပ်ချင်သူများလည်းရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော မျှော်လင့်ချက်၊ ယုံကြည်ချက်မျိုးဖြင့် အမှန်တကယ် ဖေါ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့လေကား ကောင်းပါသည်။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့သော မျှော်လင့်ချက်များဖြင့် မဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ရှိသော် -----။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် အထူးတလည် မပြောလိုသော်လည်း တတိယနိုင်ငံများတွင် သွားရောက်အခြေချနေထိုင်မည့် ယနေ့ကရင်လူငယ်များ အမှန်တကယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသေအချာ ချင့်ချိန် စဉ်းစားစေချင်သည်။ အသေအချာတွေးတော ထောက်ဆစေချင်သည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခဘ၀ဖြင့် ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀နှင့် လောကနိဗ္ဗာန်ဖြင့် ကရင်လူမျိုး ထာဝရရှင်သန်ရပ်တည်ရေးတည်း ဟူသော အနာဂတ်ဘ၀ကို အသေအချာ ရွေးချယ်စေချင်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လောကနိဗ္ဗာန်ဘ၀ဖြင့် အနာဂတ်ကရင်လူမျိုး ကမ္ဘာတည်သရွေ့ တည်တံ့နိုင်ခဲ့သော်ကား အတိုင်းထက်အလွန်ကောင်းပါသည်။ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ကရင်လူမျိုးတည်တံ့နိုင်ခဲ့သော်ကား ---------- ။
ယနေ့ အမိရပ်ရွာဒေသများတွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားကြသော အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးများဘ၀ကို အနည်းငယ် မီးမောင်းထိုးတင်ပြလိုပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ကရင်လူထုတစ်ရပ်လုံးကို အမှန်တကယ်ပင် ငြိမ်းချမ်းရေးအနှစ်သာရအပြည့်အ၀ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပြီလော ---။ ကရင်လူမျိုးကို ချစ်လှပါသည်ဆိုသော အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းရေးတမံတော်များသည် ယနေ့ ကရင်လူထုကြီးကိုသာ ဒုက္ခပေးနေသယောင်ပင်ဖြစ်နေသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးတမံတော်များသည်လည်း မိမိတို့ကိုယ်ကို အသေအချာ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ဖို့ လိုပါပြီ။ တစ်ချိန်တုန်းကတော့ အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာအတွက် အမှန်တကယ်လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်မည်ဟူသောရည်ရွယ်ချက်၊ ခံယူချက်များဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတမံတော်ဘ၀များဖြင့် မိမိတို့၏ရပ်ရွာဒေသများတွင် အခြေချရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။
၁၀ စုနှစ်ကာလတစ်ခု ကျော်လွန်လာသည့်တိုင်အောင် မိမိတို့၏ အမျိုးဘာသာ သာသနာတော်အတွက် အဘယ်အတိုင်းအတာမျှဖြင့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါပြီလော ---။ မိမိတို့ကရင်လူမျိုးအတွက် လူနေမှုဘ၀မြှင့်တက်လာအောင် ပညာရည် အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာအောင် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါပြီးလော----။ မိမိတို့၏ စာပေယဉ်ကျေးမှုများ ဆထက်ထမ်းပိုးတိုးမြင့်လာအောင် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ မြင့်တင်နိုင်ခဲ့ပါသလော -----။
ကရင်လူထုအတွက် မေးခွန်းပုစ္ဆာပေါင်းများစွာဖြင့် ယနေ့ ငြိမ်းချမ်းအရှင် သခင်များ မိမိကိုယ်ကို မေးကြည့်စေချင်သည်။ ဝေဖန်ဆန်းစစ်စေချင်သည်။ အားရကျေနပ်လောက်သောအဖြေများ ကရင်လူထုကြီးအပေါ် ပေးနိုင်ပါပြီလော။ အနာဂတ်အတွက် ဘယ်လိုရှေ့ ဆက်ကြမည်ကိုကော မြင်ယောင်ပါပြီလော။ ယနေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတမံတော်များအနေဖြင့် သူတစ်ပါးလက်ခုပ်ထဲကရေဘ၀အဖြစ် ခံယူကြပါမည်လော။ ကရင်လူမျိုးများ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ရာသက်ပန် တည်တံ့သွားနိုင်ရေးအတွက် ယနေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစေတမန်များ အထူးတလည်တာဝန်ရှိသည်။ ရေတိုရေရှည်စီမံကိန်းများ ချမှတ်ပြီး ကရင်လူမျိုးများ ဘာသာစကား၊ စာပေယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများ မပျောက်ပျက်ရအောင် နည်းမှန်လမ်းကောင်းများ ချီတက်သွားစေချင်သည်။ သို့ မဟုတ်ပါက ကရင်လူမျိုးအနာဂတ်အတွက် ရင်လေးစရာအတိပင် ----။
အင်အားနည်းသူကို အင်အားကြီးသူက အနိုင်ယူလွှမ်းမိုးတတ်သော အစဉ်အလာသည် ကမ္ဘာဦးကျောက်ခေတ်ကတည်းက အစဉ်အလာဖြစ်သည်ကို အစဉ်သတိချပ်သင့်သည်။
ဤမေးပုစ္ဆာတိုင်းအတွက် အဖြေရှိသလို ဖြစ်ပေါ်လာသောပြဿနာတိုင်းအတွက် ထွက်ပေါက်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ မှန်ကန်သောနည်းလမ်းထွက်ပေါက်ဖြစ်ဖို့ တော့ အထူးလိုအပ်သည်။ ယနေ့ ကရင်လူမျိုးများ ကြုံတွေ့ နေရသောလူနေမှုဘ၀ပြဿနာများအတွက် ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်ပေးနိုင်ရေးမှာ ကရင်အမျိုးသားတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိသည်။ တစ်ယောက်အားဖြင့် ဖြေရှင်းမရသော် စုပေါင်းအားဖြင့် ဖြေရှင်းရမည်။ ဦးစီးဦးဆောင်များ နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြင့် ချီတက် အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရေးအတွက် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ အာဝါဒေး (OurDay)ဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်တစ်လွှားတွင် ခေတ်စားနေသော ပျော်ရွှင်ပွဲများသည် အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်ကရင်လူငယ်များအတွက် ကောင်းသော နိမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်တန်ရာချေ။
ကရင်လူမျိုးအနည်းစု ကြီးပွားချမ်းသာရေးမျှဖြင့် ကရင်လူထုကြီးတစ်ရပ်လုံး လူနေမှုဘ၀အဆင်ပြေသည်ဟု မဆိုလိုနိုင်ပါ။ “ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော”ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်များ ယနေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအရှင်သခင်များဦးနှောက်ထဲတွင် သံမှိုမစွဲသင့်ပါ။ မိမိ၏အမျိုးသားထုတစ်ရပ်လုံးအတိုင်းအတာအထိ တွေးခေါ်မျှော်မြင်ပြီး အားစိုက်မတ်မတ် ချီတက်သွားစေချင်သည်။ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဘ၀ဖြင့် ကရင်လူထုကြီးတစ်ရပ်လုံးကို လက်တွဲခေါ်သွားစေချင်သည်။ သို့ မှသာ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ကရင်လူမျိုးထာဝရရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ပါမည်။
ရေတိုလူနေမှုဘ၀မြင့်တက်မှုထက် ရေရှည်လူနေမှုဘ၀မြင့်တက်မှုက ပိုအရေးကြီးသည်။ တဒင်္ဂစိတ်ချမ်းသသာခြင်းထက် ရာသက်ပန်စိတ်ချမ်းသာခြင်းက ပိုအရေးကြီးသည်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ယနေ့ ကရင်အကြီးအကဲများ မိမိတို့ ကရင်လူထုကြီး ရေရှည်ဘ၀အရေးကို အထူးတလည် ခံယူဖေါ်ဆောင်စေချင်သည်။ နိုင်ငံတွင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအသီးသီးက မိမိတို့ တိုင်းနိုင်ငံတော်ကြီး ရေရှည်တည်တံ့တိုးတက်နိုင်ရေးအတွက် ရေတိုရေရှည်စီမံကိန်းများ ချမှတ်ပြီး လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ ထိုစံနမူနာများကို ယနေ့ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ကရင်အကြီးအကဲခေါင်းဆောင်များ အတုယူအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်စေချင်သည်။
ရေတိုဆင်းရဲဒုက္ခ ကရင်လူထုကြီးဘ၀ထက် ရေရှည်လောကနိဗ္ဗာန် ကရင်လူထုကြီးဘ၀ကို ဖြစ်စေချင်သည်။ ပေါ်ပေါက်စေချင်သည်။ စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးလောကနိဗ္ဗာန်ဘ၀ဖြင့် အနာဂတ်ကရင်လူထုကြီးအား ရယူခံစားစေချင်သည်။ “အုတ်မြစ်သဲတိုင် တက်နိုင်ဖျားရောက်”ဆိုသောစကားအတိုင်း စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်စေချင်သည်။
အထက်ပါဖေါ်ပြချက်များသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ရည်ရွယ်ပြီးရေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကရင်လူမျိုးတိုင်းကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်အခြေအနေကို မြင်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတိုင်း ခံစားပြီး တင်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါသခြင့် တိုင်ဆိုင်မှုရှိခဲ့ပါသော် အနာဂတ်ကရင်လူမျိုးဘ၀ ရေရှည်တည်တံ့နေနိုင်ရေးဟူသော အသိစိတ်ဓါတ်၊ ခံယူချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် နားလည်ခွင့်လွှတ်ကြပါရန် အထူးတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ကျနော့်အမြင် အတွေးအခေါ်ခံယူချက်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ကရင်လူမျိုးအပေါ် စေတနာသဘောထားများ ချွတ်ချော်မှားယွင်းတင်ပြမှုရှိခဲ့သော် သက်ဆိုင်ရာက၀ိပညာရှင်များက အညတြစာရေးသူအားလည်း ခွင့်လွှတ်နိုင်စေရေးအတွက် အထူးဝန်ချတောင်းပန်အပ်ပါသည်။
“အားနည်းသူကို အားကြီးသူက အနိုင်ယူလွှမ်းမိုးတတ်သောအစဉ်အလာသည် ကမ္ဘာကျောက်ခေတ်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့သည်” ကို ယနေ့ကရင်လူမျိုးများ မမှိတ်မသုန် သိမြင်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါကြောင်း နိဂုံးချုပ်တင်ပြလိုက်ရသည် ------။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း passport မရှိသူများ လုပ်ဖို့အြ...
အမေရိကန်သွားခွင့်မရရင် မြန်မာပြည် ပြန်ပို့မှာစိုးရ...